XASAASI + DAAWO VIDEO:”Somaliland labo Jabhadood baa ka jira tan Saddexaadna ayaa laga Filayaa!”waxa yiri | HalQaran.com
Boorame (Halqaran.com) – Boqorka beelaha Gabooye ayaa maanta si adag u weeraray madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa, isagoona ka hadlay Jabhadaha ka dillaacay deegaannada Somaliland.
Boqorka beelaha Gabooye ayaa sheegay in maanta caddaalad darro weyn ay ka jirto xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, balse uu rabo in uu ka hor yimaado Jabhadaha soo ifbaxay.
‘‘Caddaalad darrada maanta Somaliland ka jirta ee Muuse Biixi uu hayo, Maxamed Siyaad Barre wuu ka xishoon jiray,, ayuu yiri Boqorlka Beelaha Gabooye
Wuxuu xusay Boqorka Beelaha Gabooye, in madaxweynaha Somaliland uu iminka maqli karin wax Jabhad la yiraado
‘‘Hadda wuxuu yiraahdaa Muuse Biixi, ma rabno cid Jabhad ah ma maqli karo, anaa soo qabanaya. Siyaad barre ma wuxuu oran jiran ii soo qabta Muuse Biixi waa Jabhadoo way baxeene,, ayuu yiri Boqorlka Beelaha Gabooye.
Sidoo kale, wuxuu hadalkiisa intaasi raaciyay, ‘‘Caddaalad darro soo ka aysan bixin, dee Jabhadana caddaalad darro bay ka baxeen, haddii waddanka wax laga baddali waayo, kacdoon shacab ayaa dhici doona, madaxtooyada baana loogu daadan doonaa ina Biixi”.
Haddaba Hoose ka Daawo Muuqaal Boqorka Beelaha Gabooye:
DAAWO VIDEO: ”Hadduusan M/weyne Muuse Biixi dhageysan tabashada reer Awdal, wixii dhaca isagaa ka mas’uul ah!” waxaa yiri….+ (Farriin culus)
Boqorka beelaha Gabooye